Ukuphupha ngokuBambisana Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukupasa kuthetha ukugqibezela ngempumelelo into okanye ukungqina ukuba ufanelekile. Iimviwo kufuneka zenziwe esikolweni nasemsebenzini. Kwinqanaba labucala, ubomi buphethe izilingo ezininzi. Ukuzazi kakuhle kuhlala kufuna ukomelela kwengqondo kunye nokomoya. Kodwa abanye abantu bafuna ukuqonda. Ukupasa oku kudala imvakalelo eyomeleleyo yolonwabo; umkhulu umceli mngeni, kokukhona imincili yempumelelo.
Ukuba umntu uphupha ngokuphumelela uviwo, uyonwaba kwaye unemincili. Uloyiko lwangaphambili kunye nokungaqiniseki kuyalityalwa, isiqabu kunye nokuzingca kwimpumelelo yomntu kukodlula konke okunye. Ukutolikwa kwamaphupha, unxibelelwano phakathi kwephupha kunye nemeko yokwenene yobomi kubaluleke ngakumbi.
1 Uphawu lwephupha "lukhona" - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha "lukhona" - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha "lukhona" - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha "lukhona" - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko lamaphupha, uphawu lwephupha "lukhona" luphawu lwempumelelo kubomi bemihla ngemihla. Lwela ubomi. Ukuphupha kuzijonga ngokunzulu kwaye kuyachasa ityala ephupheni. Ukupasa uviwo kukubonisa umnqweno wakho wokwenza kakuhle.
Los Ingqondo yokufezekisa ebuthongweni kunokuba nefuthe elihle ekuzithembeni kokulala. Nangona kunjalo, uphawu lwephupha ekuchazeni iphupha nalo linokutsalela ingqalelo kwinto yokuba engazibeki ibar ngokwakhe. Ephupheni, ukuphupha kuyaphumelela ekufezekiseni ulindelo oluphezulu. Kuya kufuneka ukuba ufumanise ukuba iyamfanela na naye.
Ngokwenkcazo edumileyo yamaphupha, uphawu lwephupha "olukhoyo" luphawu olulungileyo lwekamva. Iphupha leempawu ezintle ezinje ngesazela, amabhongo kunye amabhongo uvuzwe kakuhle. Iphupha elo libonisa ukuba amathemba olonwabo kunye nokufezekiswa kweminqweno yobuqu aya kuzalisekiswa.
Kwelinye icala, uphawu lwephupha lunokubakho ngaphambili Ukungaqondi lumkisa, ukuba umntu ophuphayo ucinga ukuba uya kuyidlulisa yonke imiceli mngeni ngesibindi. Ngokunxulumene nezinto eziyingozi, iimvakalelo amava omnye ephupheni abonisa imvakalelo efanayo kumava okwenyani ahambelana noko. Uvakalelo oluqinisekileyo oluvela ngophawu lwephupha "olukhoyo" kukuchazwa kwephupha, ke ngoko, isimemo sokucwangcisa ngokubonakalayo kunye nokubumba ubomi.
Uphawu lwephupha "lukhona" - ukutolikwa kwengqondo
Ngengqiqo yokutolikwa kwengqondo yamaphupha, uphawu lwephupha "lukhona" luphawu lwentlalontle yanamhlanje. Ukuphupha kuhlawula uxinzelelo lwemihla ngemihla kunye nokuba kunokwenzeka Uloyiko lokusilelaukumelana ngempumelelo neemviwo kunye neemeko ezinzima ephupheni. I-subconscious yakho ibeka ukungabikho kokuzithemba kunye ne-unconscious inhibitions of character. Yomeleza malunga. Uphawu lwephupha "lukhona" lukuxelela ukuba uya kuphumelela ngokhathalelo, ukukhuthala kunye nokuzimisela.
Ngokwenkcazo yamaphupha, ngamanye amaxesha iphupha likwaveza umnqweno wokufumana impumelelo. Oku kunokuba kunxulumene nemeko ethile okanye kungangumzamo wokungazi wokunyusa ukuzithemba.
Ukuba amaphupha ayimiceli mngeni eyingozi okanye enomdla, oku kubonisa ukudinwa kobomi bemihla ngemihla obuthathwa njengobonwabisayo. Isimboli yephupha ibonisa iminqweno ecinezelweyo yamava agqithisileyo okanye angaqhelekanga.
Uphawu lwephupha "lukhona" - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo, uphawu lwephupha "lokudlula" luphawu lovavanyo lokomoya. Ukuphupha kuhambelana nokutolika komntu ngamaphupha. Indlela elungileyo kwaye uya kuqhubeka nokukhula ngokwasemoyeni.